Bonito misy voatabia - Resety Thermomix | ThermoRecipes
Trondro bonito misy voatabia
TRONDRO36 minitraOlona 4
Tsy mbola nanomana an'io fomba fahandro io tamin'ny Thermomix® aho. Iray amin'ireo lovia ireo izay anananao ny hevitra ao anaty lapoaly ary sarotra ho anao ny manandrana amin'ilay robot. Fa ny andro hafa dia nampaherezina aho ary rehefa vitako sy hitako ny vokatra tsara Nanenina aho noho ny tsy nahavitako azy io taloha, indrindra fa tsy mandoto ny lakozia amin'ny fihoaran-tsakafo izy.
Tsotra be ny manao azy. Mila manao fotsiny a tongolo nendasina ary ampio ny bonito miaraka amin'ny voatabia.
Izy io dia fomba fahandro mety amin'ny karazana allergy rehetra toy ny celiac na atody na lactose intolerant, noho izany dia azo ampiharina tokoa rehefa misy vahiny Eny, tsy maharary olona izany.
Ary, na dia trondro iray aza izy io, miaraka amin'ny voatabia dia tian'ny tanora sy ny lehibe izy, indrindra raha manolotra azy ireo amin'ny chips na a garnish vary fotsy.
Ity lovia ity dia iray amin'ireo izay mety amin'ny reposado tsara ary tsara kokoa isan'andro dia amin'ny manaraka, miaraka amin'ny tsiro efa miorina kokoa.
1 Trondro bonito misy voatabia
Miaraka amin'ny Thermomix® ity fomba fahandro ity dia tsotra kokoa ary azo ampiharina kokoa satria zara raha voaloton'ny lakozia.
Fotoana fiomanana: 5M
Fotoana manontolo: 36M
Tongolo 180 g
50 g ny dipoavatra maitso
Voatabia voatoto 400 g
500 g bonito (amin'ny taco tsy misy hoditra na taolana)
Sira sy dipoavatra mba hanandrana)
Nataonay tao anaty vera, tongolo, tongolo lay ary sakay maintso ary notorotoroinay 4 segondra, hafainganam-pandeha 4.
Ampio ny menaka ary endasina 10 minitra, hafainganana 100º, hafainganana 1.
Ampio ny voatabia ary mahandro 15 minitra, hafainganana 100º, hafainganana 1.
Mandritra izany fotoana izany, manandrana ny tononkalo isika. Apetratsika amin'ny lolo ny lolo ary ampio ny bonito amin'ny vera. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, 100º, fihodinana havia, sotro haingana.
Rehefa ajanona ny milina dia avelantsika hitsahatra 5 minitra hafa indray ary afaka manompo.
Fanazavana fanampiny - Fomba fahandro fototra: Vary fotsy amin'ny varoma
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Sakafo rezionaly, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, TRONDRO, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » TRONDRO » Trondro bonito misy voatabia
Goizalde dia hoy izy:
Tsara, lehibe, lehibe ...
Tsy dia tsara tarehy intsony io ao amin'ny vata fampangatsiahana, fa rehefa tonga ny vanim-potoana dia ataoko imbetsaka toy izany, ao amin'ny Thermo. Tsotra sy tsotra be ...
Mamaly an'i Goizalde
Marina ny anao ry Goi, tiako i bonito ary tiako amin'ny ovy ity fomba fahandro ity.
cuca dia hoy izy:
Manana ny thx 21 aho ary tsy fantatrao ny hatezerako rehefa mahita fomba fahandro amin'ny vary sy zavatra hafa ampiasanao ny hafainganan'ny sotro ianao. Misy fika ve mba hahafahan'ny thx manao ireo zavatra ireo?
Mamaly an'i cuca
Adela dia hoy izy:
Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fametrahana lolo sy hafainganana 1
Valiny tamin'i Adela
Raquel olivares guerrero dia hoy izy:
Vao avy nanao an'io aho ary nasiako tsy misy lolo ny sobika, ananako ilay 21 ary nataoko toy izany, tena mandeha tsara. Nilaza tamiko ny namako fa dokam-barotra thermomix izany no nataoko.
Mamaly an'i Raquel olivares guerrero
mari carmen dia hoy izy:
Hosoratako amin'ny talata ity lovia ity, holazaiko aminao, Omaly ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i SANDRA zanako vavy ary namboariko ho azy ny mofomamy miaraka amin'ny sôkôla telo sy ny mofomamy karamela misy nigandy ary ny mofomamy walnut dia fahombiazana lehibe ... ireo resipeo rehetra izay Ataoko eo ny anao, tohizo toy ity GIRLS ity ... jereo, mpanentana thermomix aho ary ny mpanjifako rehetra miteny azy ireo hiditra ao amin'ny bilaoginao, ary avy eo dia miteny amiko izy ireo fa manao ny resinao, lazaiko aminao ny marina, samy tsara daholo ianareo ... FIVORIANA SY FIVORIANA ho an'ny olon-drehetra… ..FROM TOMELLOSO
Valio i mari carmen
Mari Carmen, faly aho fa tianao be ireo mofomamy. Masoandro ianao miaraka amin'ireo hevitrao ao amin'ny bilaogy.
Oroka kely ary arahabaina maro ho an'ny zanakao vavy.
Hadinoko rehefa nanao ny mofomamy caramel tamin'ny kennel aho, ny fotony dia namboarina ho toy ilay misy sôkôla 3 misy cookies ary ity tena tsara dia ampirisihiko ianao hanao ity mofomamy ity izay tena tsara, tena tsaraaaaaaaaaaaa …………… tomelloso ………… GOODBYE mahita anao isan'andro aho …………………….
Tiako ny bonito miaraka amin'ny voatabia sy tongolo. Ataoko ao anaty vilany GM foana ireto recette ireto, tsy mbola nieritreritra ny hanao azy ao anaty thermomix aho. Manana ny fahatsapako fa hivoaka tsara kokoa aza izy io, mora kokoa koa ny manadio. Koa noho izany fety betsaka ho an'ny ankohonako.Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra.
Faly aho fa mamporisika anao izahay hanome ny fiainanao thermomix bebe kokoa. Mivoaka matsiro ny zava-drehetra, mifalia ary ho hitanao fa tsy ela dia te-handro miaraka aminy ianao. Mirary ny soa indrindra
Tiako ity lovia ity !!!
Matetika koa aho no manao azy matetika fa tsy amin'ny thermomix akory, amin'ity herinandro ity aho manandrana azy….
Ny zoma dia nanao ilay coca pudding mainty aho ary nivoaka tena tsara dia tsara, miaraka amin'ny resipeo dia fahombiazana azo antoka hatrany izany.
Valiny tamin'i Elena
Andramo ny bonito dia lazao anay ny momba an'i Elena. Tian'izy ireo ao an-trano izany, antenaiko fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra
Aina dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha hitako fa mahafinaritra ao amin'ny fivarotana lehibe izany, isaky ny sahy manao azy aho dia tsy hitako. Hitako fa miresaka momba ny vanim-potoana i Goizalde, ary ny fanontaniako dia hoe: rahoviana no vanim-potoana iasana? Misaotra betsaka!!
Mamaly an'i Aina
Aina, na dia azontsika atao aza ny mankafy azy mandavantaona, ny vanim-potoanan'ny tuna dia ny fahavaratra sy ny volana mafana manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra.
Antonia dia hoy izy:
Inona ny fomba fahandro matsiro, ity tsara tarehy ity izay tsy ialako raha tsy manamboatra azy, tsotra be izy io.
Mamaly an'i antonia
Tena manan-karena sy mora ity fomba fahandro ity, ny zavatra tokana ananako dia therm21, ny hafainganam-sotro dia tsy manana an'io. fa hoporofoiko, hananako izay mivoaka. misaotra tamin'ny resipeo.
Valio amin'i MARY
Mary, mila mametraka ny lolo ianao ary mametraka ny hafainganana 1.
Mahita volondava ao an-trano izahay, hataoko izany, satria ny tena marina dia zavatra mamy no tena ataoko ary ho an'ny resipeo dia azonao atao ihany koa ny manamboatra zavatra masira isan'andro isan'andro nefa manome tahotra kely kokoa ahy izany ary izaho miafara amin'ny fanaovan'izy ireo ny fomba nentim-paharazana hatrany; Hiezaka aho ary holazaiko anao. Arahaba sy fisaorana betsaka.
Animate Marisa, resipeo tsotra izy ireo ary matsiro. Ny thermomix dia tsy ny fanaovana amboradara ireo tsindrin-tsakafo fotsiny, ny sisa lovia no mivoaka tsara ka mahatonga anao ho masaka mahandro. Mirary ny soa indrindra
Hanandrana ity fomba fahandro ity aho fa tsy ny tuna no hanaovako azy amin'ny cod vaovao, ataoko fa hitovy ihany izy io. Hisakafo rahampitso ka rahampitso dia manao arahaba sy misaotra anao aho.
Loli, mazàna aho dia manao recette ho an'ny cod miaraka amin'ny voatabia izay ao anaty index. Jereo izany satria mivoaka tsara.
Ruth dia hoy izy:
Ity fomba fahandro ity dia tokony ho faty! matsiro sy mora be !!. Misaotra!
Valiny tamin'i Rota
Rut faly aho fa tianao io !! Ny marina dia tsotra izy io ary manankarena tokoa. Mirary ny soa indrindra
Nuria dia hoy izy:
Salama, azonao soloina ny voatabia voatoto voajanahary ho voatabia nendasina, ity karazana hida ity, noho izany dia hafohezina ny fotoana, sa tsy izany?
Mamaly an'i Nuria
Ankoatra ny fanaovana ity fomba fahandro ity amin'ny bonito, azo atao karazan-trondro hafa ve izy io?
Hanao ahoana izany?
Valiny tamin'i Michelangelo
Tsy mbola nanandrana azy hafa aho, fa anontanio ny mpivaro-trondro anao hoe inona ny trondro azo atao toy ny bonito miaraka amin'ny voatabia, azo antoka fa hanome torohevitra tsara antsika izy ireo ary hilaza aminay izay lazainy aminao, azafady. Mirary ny soa indrindra
Androany no nanaovako ity recette ity. Tsara fa raha ny tsiriko dia ranon-javatra kely ny saosy.
Miarahaba anao amin'ity pejy mahafinaritra ity izay manampy ahy be dia be.
Valio ny ELISA
Omaly no nataoko ity recette ity ho an'ny sakafo hariva, fa raha tokony ho tsara dia namboariko tamin'ny cod, nasiako sakay kely dia nivoaka izy tena tsara. Natahotra kely aho sao ho vaky ilay cod satria vaovao, nefa nivoaka manontolo ary marina fotsiny. indray misaotra noho ny resinao. fiarahabana.
conchi dia hoy izy:
Salama! Azoko atao ny manamarina fa tena mahasoa ity fomba fahandro ity, mila miaiky aho fa ato an-tranoko dia samy tia trondro daholo isika fa mbola tsy nanana bonito be ranony mihitsy. Miarahaba anao amin'ny bilaoginao.
Mamaly an'i conchi
Conchi, faly aho fa tianao izany. Ao an-trano koa izahay dia tia trondro fa ity iray indrindra indrindra ny zanako vavy tia ovy.
Ity dia fiomanana tsy an-kijanona tsy an-kijanona. Nanomana an'ity lovia ity aho, matsiro be. Omaly aho no nanamboatra azy ary nametaka dipoavatra vitsivitsy tao amin'ny varoma raha vita ny voatabia ary rehefa nataoko ny bonito dia nampiana azy ireo tao anaty vera. Manankarena be koa izy io.
Mirary ny soa indrindra. Tsara ianao… ..
nuria leiva dia hoy izy:
Salama, Nuria aho, nampiasa nyomiomix fotsiny izy ireo, saingy hatramin'ny nahitako azy dia ampiasaiko betsaka kokoa, tiako ny resinao, misaotra.
Mamaly an'i nuria leiva
Salama izaho Maria,
Manomboka eo amin'ny tontolon'ny Thermomix aho ary hitako ny bilaoginao. Mahatalanjona izy io. Ary ny fomba fahandro tena tsotra sy mora atao. Te hamporisika ny tenako aho hanao ny bonito miaraka amin'ny voatabia. Manana fanontaniana aho, vaovao ve ny bonito, mpivaro-trondro?
Raha mpivaro-trondro i Maria dia angataho izy ireo hamono azy ho anao.
Tsara !! Na dia efa "narahiko" tamin'ny oregano kely aza aho, hmmmm !!!
Hevitra tsara izany Virginia, andramo i oregano. Misaotra !!
elenairene dia hoy izy:
Mampalahelo ny zazavavy, misaotra betsaka anao momba ity fomba fahandro ity. Tsy dia tiako loatra ny trondro, fa nanao ary nanala ny sasany nandritra ny andro hafa. na ny vadiko aza efa nahazo kely (ary tsy tiany trondro mihitsy).
oroka super ary tohizo, tiako ny bolg¡¡¡¡
Mamaly an'i elenairene
Faly be aho fa tianao izany, ny marina dia mirentirenty toy izany ny trondro.
Ana Mazarío Egea dia hoy izy:
Ataoko ao an-trano izany rahampitso, holazaiko anao ny vokany. Miarahaba anao amin'ireto fomba fahandro mahafinaritra ireto ary taom-baovao sambatra.
Valiny tamin'i Ana Mazarío Egea
Irenearcas dia hoy izy:
Tsara! Faly be izahay fa tianao izany ary averinao atsy ho atsy. Kilasika izany!
Mamaly an'i irenearcas
Trillalua dia hoy izy:
misaotra resipe tsara
Mamaly an'i Trillalua
Misaotra anao teo foana !!
Mivadika Mihitsy! dia hoy izy:
Te hanontany aho raha raha vita ny voatabia sy ny bonito (20 min) dia afaka mametraka ovy ao anaty varoma isika, ary manana lovia feno.
Tsy haiko raha misy fiatraikany amin'ny fandrahoana sakafo.
Mamaly an'i alleitoo
Heveriko fa hevitra tsara izany!
Azonao atao ny mametraka ny ovy ao amin'ny varoma. Tsisy olana.
Fanontaniana iray ananako, raha lasa tsara tarehy sy voatabia izy dia ho tsara ve izany? Arahaba sy fisaorana.
Miankina amin'ny vola tianao hampitomboina izany. Raha tsikaritrareo, amin'ny dingana farany dia angatahiny ianao mba afangaro ny saosy amin'ny saosy, ka raha manampy bonito sy saosy bebe kokoa ianao dia tsy hanana olana fa tsy hampitomboiko avo roa heny ny vola satria mieritreritra aho fa tsy ho tafiditra ny zava-drehetra ao anaty vera.
Cookies sacher misy fameno paiso